Hamro Patro Sanketik Bhasa Diwas | Hamro Patro
अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस विशेष अडियो सामग्री
समाचारको छेउमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना अपडेटमा लगायत धेरै भिडियोहरूमा छेउमा बसेर हातको इशाराले सम्झाइरहेका सांकेतिक भाषा दोभाषेहरूलाई सम्झना गरौँ । याद आयो नि ? यिनै सांकेतिक भाषा दोभाषेहरूले गर्दा समाचार या अन्य कुनै पनि सामाग्रीहरू समावेशी हुन्छन् । हामी लगायत सुस्तश्रवणहरूले पनि यी कुराहरू सहजै बुझ्न सक्नुहुन्छ । हरेक औपचारिक र अनौपचारिक भिडियो सामाग्रीहरू अनि सार्वजनिक भेला र अपडेट अनि सम्वोधनहरूलाई यसरी सांकेतिक भाषाका दोभाषेहरूको प्रयोग र विज्ञताले सबैका लागि सहज र समावेशी बनाउँछ ।
विश्वभरि ७२ मिलियन अर्थात् ७ करोड २ लाख भन्दा बढी मानिस सुस्त श्रवणशक्ति भएका छन् । यिनीहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू विकासोन्मुख देशहरूमा बस्छन् । समग्रमा भन्दा यी मानिसहरूले ३०० भन्दा बढी प्रकारका सांकेतिक भाषाहरू प्रयोग गर्छन ।
तिनै दोभाषेहरूको संकेतले समाचार बुझ्न धेरैलाई सहयोग गर्छ । आवाज नसुन्नेहरूका लागि आवाजको काम गर्दछ । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २३ तारिखका दिन विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाइन्छ । सन् २०२१ को सांकेतिक भाषा दिवसको नारा छ, ुध्भ क्ष्नल ँयच ज्गmबल च्ष्नजतकु । जसको अर्थ हुन्छ, हामी मानव अधिकारका लागि सांकेतिक भाषामा कुरा गर्छौै । यस वर्षको सांकेतिक भाषा दिवसको परिवेश अलिक फरक छ । कोरोना र संक्रमण जोखिममा सारा विश्व आफूले पाउने जानकारीमा निर्भर छ । अनि जानकारीका स्रोतहरू सबैका लागि मैत्रीपूर्ण नहुन सक्छन् । कोरोनापछिको विश्वमा यस दिवसले सांकेतिक मात्र नभई अन्य शारीरिक दुर्वलतालाई पनि आवश्यक मैत्रीपूर्ण संरचनाको प्रविधि अनि माध्यमहरूमार्फत्को सेवा, सुविधा र समाचारहरूको पैरवी गर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको दीर्घकालीन लक्ष्यका सूचिमा सांकेतिक भाषाको प्रवद्र्धन र प्रयोगलाई पनि निकै महत्वका साथ राखिएको छ । सन् २०१८ मा प्रथम पटक यो दिन मनाइएको हो । कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने उद्देश्यले सबैलाई एकैसाथ विकासको मूलधारमा उभ्याउन यस दिनको निकै ठूलो पैरवी हुने गर्छ । विश्वका हरेक कुना कन्दराका नेतृत्वले स्थानीय, राष्ट्रिय अनि क्षेत्रीय तवरमा सांकेतिक भाषाको प्रयोगलाई समावेश गर्न सकून् भन्ने संकल्पका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवसको परिकल्पना गरिएको हो । सन् २०२१ को अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवसको प्रभाव चौतर्फी रहोस् । यस दिवसको सबैलाई अर्थपूर्ण शुभकामना ।
आज तृतीया श्राद्ध, यस तिथिमा गोलोकधाम हुनुभएका पितृहरूको सम्झनास्वरूप आज श्राद्ध गरिनेछ । सोह्र श्राद्धको प्रारम्भसँगै अबका सकल पक्षहरू पितृ पक्षका स्वरूपमा आउँदै जानेछन् । पृथ्वी र स्वर्गबीचमा भएको पितृ लोकमा रहेका सबै देवता समान पितृहरूको मोक्षको कामना । सकल पितृहरूले बैतर्णी नदी तर्न पाउन अनि पितृप्रेम कायम रहोस् । पितृहरूको आर्शिवाद कायम रहोस् । सदीक्षा र शुभेच्छा कायम रहोस् । हामी आजको स्वरूपमा पितृहरूको अवशेष र पितृहरूकै स्वरूप हौँ, हैन र ?
प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षमा दिवंगत पितृका नाममा गरिने सोह्र श्राद्धका लागि आवश्यक पर्ने अपरान्हकालको समय निर्धारण गरिएको छ । यो समयभित्रमै पिण्डदान गर्नुपर्नेछ । तर्पण, दियो पूजा, विश्वेदेवा ब्राह्मण लगायत पूजा तोकिएको समयअघि नै गर्न सकिनेछ । यो समयमा पिण्डदान नगरे पितृले पाउँदैनन् भन्ने मान्यता रहन्छ ।
वैदिक सनातन संस्करमा सामान्यतया पितृकर्म अर्थात् श्राद्ध दुई पटक गरिन्छ । वर्षमा नियमित श्राद्ध पितृहरूको देहावसान भएको तिथिमा र अर्को श्राद्ध चाहिँ सोह्र श्राद्धको अवधिमा गरिन्छ । यस वर्षको सोह्र श्राद्धको शुरुवातसँगै हरेक परिवारमा शान्ति, खुशियाली कायम भइरहोस् । पितृहरूको आशिष सदासर्वदा कायम होस् । स्वर्गको ढोका खुलेर पितृहरूको बैकुण्ठ बास होस्
तृतीया श्राद्ध तिथिमा बैकुण्ठबास हुनुभएका पितृहरूको मोक्षको कामना ।